Hlola iBucharest, i-Romania - World Tourism Portal
Hlola iBucharest, i-Romania
Yini ukubona. Izindawo ezihamba phambili ezihamba phambili eBucharest, eRomania
Yini okufanele uyenze eBucharest
Uhambo losuku kusuka eBucharest
Iwebhusayithi esemthethweni yezokuvakasha yeBucharest
Bukela ividiyo ngeBucharest
Hlola iBucharest, inhloko-dolobha yaseRomania nedolobha elikhulu kunawo wonke, kanye nesikhungo sezimboni esibaluleke kakhulu nezentengiselwano ezweni. Njengoba inabahlali abayizigidi ezingama-2 edolobheni elifanele futhi elingaphezu kwezigidi zama-2.4 endaweni yedolobha, iBucharest ingelinye lamadolobha amakhulu eSoutheastern Europe, idolobha elikhulu kunayo yonke phakathi kweBerlin ne-Istanbul.
IBucharest yidolobha elikhulu kunawo wonke le-6th e-European Union ngabantu abangaphansi kwemingcele yedolobha, ngemuva London, Berlin, Madrid, Rome, Futhi Paris.
IBucharest yindawo yokuqala yokungena Romania. IBucharest yidolobha elikhulayo elinamaphrojekthi amaningi amakhulu wengqalasizinda aguqula ubuso bomuzi obudala. Wayaziwa esikhathini esidlule ngokuthi “I-Little Paris, ”IBucharest isishintshe kakhulu muva nje, futhi namuhla isiyinhlanganisela ekhangayo yakudala neyintsha engahambisani nedumela layo lokuqala. Ukuthola isonto elidala le-300, isakhiwo sehhovisi elinezinsimbi nengilazi kanye namabhulokhi efulethini lamaKhomanisi eduze komunye nomunye kuyinto ejwayelekile. IBucharest inikeza ezinye ezikhangayo ezinhle kakhulu, futhi uye, eminyakeni yamuva nje, uhlakulele umuzwa oyinkimbinkimbi, wokuthambekela, wanamuhla abaningi abaye balindela enhlokodolobha yaseYurophu. IBucharest ibilokhu yenza umsebenzi omkhulu wokwakha nowokwenza izinto zesimanje eminyakeni edlule, njengeBasarab Overpass neNational Arena. IBucharest isizuze ekuqhakambiseni ezomnotho kanye nezibonelelo ze-EU ezisize ekwakheni kabusha izingxenye zedolobha ezinganakwa, njengendawo engokomlando yeLipscani.
Ulimi olusemthethweni isiRomania. Iningi labantu abasha abafundile bazokhuluma kahle isiNgisi; futhi ukubuyela emuva kwalokhu kuzoba ukuthi ngokuqinisekile ngeke Bakufune ukuthi uzame isiRomania sakho, kuze kube sezingeni lokubonisa ukungasebenzi kwakho kahle! Iningi labantu abafundile abazalwe ngaphambi kwe-1970 bazokhuluma kahle isiFulentshi, iSpanish noma isiNtaliyane kahle. Abantu baseRomani bakhuluma isiRomany sabo bomdabu, isiRomania, kwesinye isikhathi isiNgisi. Ngale kwalokho, njengakwelinye idolobha elikhulu, kuzoba khona ukushaywa kwezinye izilimi njengesiShayina, isi-Arabhu, isiTurkey, nesiHungary. Ngokuphikisana nenkolelo ethandwayo, isiRussia asikhulunywa eRomania. Ngaphandle kokuba yingxenye ye-Eastern Bloc, ukusetshenziswa kwesiRussia kwakuhlaselwe. Okuwukuphela kokunye kulokhu emiphakathini emincane yamaLipovan eDobruja.
IBucharest inesimo sezulu esinomswakama esinamazwekazi onke ebusika obusika, ihlobo elishisayo nemvula elinganiselayo (amamitha angama-640 ngokwesilinganiso). Ubusika bumanzi, buyabanda futhi bubanda kakhulu.
Ihlobo ligcina ngoJuni kuya ku-Agasti futhi libonwa ngezinsuku ezishisayo nobusuku obumnandi. Kunokuhlukahluka okukhulu kumazinga okushisa phakathi kwemini nobusuku. Ngenkathi phakathi nosuku bangathola ngaphezulu kwe-30 ° C (86 ° F) ntambama, behle baye ku-15 ° C (59 ° F) phakathi nobusuku. Amagagasi ashisayo aqhamuka eningizimu angacindezela i-mercury ngenhla kwe-35 ° C (95 ° F) ngezikhathi ezithile kepha idolobha lizizwa lishisa kakhulu ngenxa yokuba khona kukakhonkolo, kubambe ukushisa. Ngenkathi ka-Agasti izakhamizi eziningi ziphuma edolobheni ziye eholidini. Abanye beya ku Greece noma iTurkey ngenkathi abanye bekhetha izindawo ezisondele kakhulu njengasogwini loLwandle Olumnyama eBulgaria noma eRomania. Amaningi abuyele eConstanta phakathi nezimpelasonto.
IBucharest inokuxhumana okuningana nezihloko eziningi zaseYurophu kanye namadolobha amakhulu eRomania, kepha kungaba nzima ukuthola indiza eqonde eBucharest esuka ngaphandle kwaseYurophu noma eMiddle East. Idolobha liphinde lifinyelelwe ngenani elikhulu lendiza ephansi, ikakhulukazi ukusuka ezindaweni lapho Italy futhi Spain kanye nakwamanye amadolobha amakhulu Germany, France, i-UK, i-Ireland, i-Belgium, i-Hungary, iTurkey, i-Austria, i-Israel njll.
I-Uber iyindlela ephephile nesebenzayo yokuthola ukusuka esikhumulweni sezindiza uye eBucharest efanele. Izindleko eziphelele ezungeza i-RON40 futhi ukugibela kungaphezu kwemizuzu ye-20. Umshayeli uzokuthatha e-International Arrivals Parking Area ngaphesheya komgwaqo usuka esigungwini esikhulu (lapho abanye bethola khona i-curbside) endaweni ephezulu.
IBucharest ixhumeka ezitimeleni eziqondile zansuku zonke eziya kumakhosi amakhulu omhlaba (i-Budapest, iChişinău, iKiev, iSofia), kanye neVienna, Venice, Thessaloniki, Istanbul, Moscow futhi nakanjani emadolobheni amakhulu kuzo zonke izifunda zaseRomania 41.
IBucharest inolunye uhlelo olubanzi kakhulu lwezokuthutha zomphakathi eYurophu, noma ngabe kwesinye isikhathi lungadida futhi lube nabantu abaningi.
Ukuqashwa kwezimoto kuPache Protopopescu Street noma i-Europcar konke kusedolobheni nasezikhumulweni sezindiza. Ungathola zonke izinkampani zokuqasha izimoto zamazwe omhlaba (i-Avis, Hertz, i-Europecar, i-Ascar, njll.) Esikhumulweni sezindiza i-Otopeni. Abanye bahlinzeka ngokulethwa mahhala esikhumulweni sezindiza. Intengo ejwayelekile yokuqashwa kosuku imayelana ne- € 20 yemoto eshibhile.
Ziningi izinkampani zamatekisi eBucharest futhi uzothola kalula i-cab lapha. Kepha qaphela! Ungathathi noma yiziphi abashayeli bezimoto abazimele, kepha sebenzisa izinsiza zezinkampani ezinkulu zamatekisi. Izimoto ezivela kulezi zinkampani zinamanani aboniswe emnyango. Umnyango ngamunye wawusebenzisa imali yokuqala “yokuhlala” (phakathi kwe-1.6 kuya ku-3 lei), imali ekhokhwa nge-km (i-1.4 kuya ku-3.6 lei) nemali ekhokhwa ngehora. Kodwa-ke, amatekisi manje abonisa inombolo eyodwa okuyimali yokuqala yokuhlala kanye nemali ekhokhwayo nge-km ngalinye.
I-Uber kanye neTaxquite ashibhile, kubanzi futhi kusemthethweni. Basebenza bezungeza idolobha, kufaka phakathi futhi beya esikhumulweni sezindiza.
Kunemihlahlandlela emibili yamahhala yangesonto ekhishwa eBucharest efaka yonke imicimbi yangesonto, kanye nohlu lwamakheli ezindawo zokudlela eziningi, amakilabhu, ama-pubs, amabha, amabhinabhasi njll edolobheni. Eyodwa yi-Şapte Seri (Ubusuku abayisikhombisa), enye i-24-FUN. Zinezigaba ezincane ngesiNgisi ezitholakalayo.
Ukuhamba ngezinyawo ngaso sonke isikhathi kuyikhambi elihle kakhulu lokujwayela idolobha elisha. Ungathola izinkambo zokuhambahamba eziqondiswa mahhala zesikhungo sasedolobheni, lokhu kungaba yindlela yabahambi abahamba nebhajethi, intsha nentsha ebhaka. Imvamisa, kufanele ubhukhe izinkambo, kepha ngesizini ephezulu kukhona izinkambo ezihlelelwe nsuku zonke, imvula noma ilanga.
Kukhona futhi izinkambo ezikhokhelwayo ezitholakalayo, kulokhu ukubhuka kuyadingeka ngaso sonke isikhathi.
Iningi lezindawo eziseduzane nasenyakatho nasempumalanga enkabeni yedolobha zinesidingo esilinganayo sezakhiwo kuya esikhungweni, ziholwa kakhulu kakhulu ngabavakashi, kepha ziphephe ngokulinganayo ngokuzulazula nje.
Indaba yeBucharest: uhambo lwesikhungo sedolobha saseBucharest. Iqala nsuku zonke e-Unirea Park, ngaphambi kwewashi, emithonjeni, amahlandla amabili ngosuku, e-10: 30 nase18: 00. Kutholakala ngesiNgisi nangeSpanishi. Ukuvakasha kumahhala, akukho ukubhuka okudingekayo.
I-Royal Century: indlela ubukhosi, Izimpi Zomhlaba kanye nenkathi yesimanje okwenze ngayo iBucharest njengedolobha elihlukile. Iqala nsuku zonke National Military Club, phambi kwefulegi, ngasemthonjeni, e-17: 00. Kutholakala ngesiNgisi. Ukuvakasha kumahhala, akukho ukubhuka okudingekayo.
Ungaqasha ibhayisekili amahora amabili ngaphandle kwendleko ekhoneni elisenyakatho-ntshonalanga yeKiseleff Park (“Parqul Kiseleff”) bese ulisebenzisa ukujikeleza eHerastrau Park eseduze. Letha ipasipoti yakho.
ICişmigiu Garden iyipaki elincane elihle elitholakala maphakathi neBucharest. Kuyinto endala kunazo zonke edolobheni (eyakhelwe i-1845-1860). Ukuqashwa kwesikebhe ehlobo, i-ice skating ngesikhathi sasebusika, indawo yokudlela enengqondo nemigoqo eminingana.
IHerăstrău Park (enkulu kakhulu yamapaki amaningi azungeze amachibi enziwe abantu emfuleni iColentina ogudla uhlangothi olusenyakatho nedolobha) i-Village Museum, inkundla yemidlalo evulekile, izinkundla zemidlalo ezahlukahlukene, okuthile okufana nepaki yokuzijabulisa nezindawo zokudlela eziningi kanye amaklabhu. Ukuqashwa kwesikebhe nokuhamba ngesikebhe ehlobo.
IBotanical Gardens, eyasungulwa e1884 eduze naseCotroceni Palace, ibonisa izinhlobo zezitshalo ezivela kuwo wonke umhlaba, kubandakanya nombukiso wezitshalo zasendaweni ezishisayo. Imali yokungena encane.
UCarol Park (owakhelwe ku-1906), indawo ethule engekude kangako nePiata Unirii, unenkundla yemidlalo evulekile ephindayo enkundleni yemidlalo yamaRoma kanye nolunye ukwakhiwa luphindaphindwa inqaba ephakathi. Ifaka ithuna leSoldier elingaziwa kanye ne-mausoleum edumile eyakhelwe igama lamaKhomanisi.
ITineretului Park, nje esiteshini esingaphansi kwesitimela eseningizimu yePiaţa Unirii, inenkundla enkulu yangaphakathi yasekhaya (uSara Polivalenta) esetshenziselwa amakhonsathi ahlukahlukene, imicimbi yezemidlalo, imibukiso njll., Ipaki lokujabulisa izingane, ukuqasha isikebhe, izindawo zokudlela eziningana nemigoqo.
IVitan Park (eyaziwa nangokuthi i-IOR Park), indawo eluhlaza phakathi kwezikhathi zamaKhomanisi ekhuphuka ngamabhilidi engxenyeni esempumalanga yedolobha (isiteshi saseTitan esitimeleni), inesonto elihle lokhuni kanye namakilabhu amaningana echibi.
I-Opera Naţională (Opera kaZwelonke), uBulevardul Mihail Kogălniceanu nr. I-70-72 (indawo ye-Eroilor). I-5-64 lei.
UFilarmonica George Enescu (George Enescu Philharmonic), Strada B. Franklin nr. I-1-3 (isikwele se-Revoluţiei). Izindlu eRomania Athenæum, uphawu lwedolobha.
Teatrul Naţional de Operetă Ion Dacian (Ion Dacian National Operetta Theatre), Bulevardul Nicolae Bălcescu nr.2 (eduzane nesikwele seYunivesithi).
Amafilimu amaningi ahlolwe ngolimi lwawo lokuqala nemibhalo engezansi yesiRomania; ezinye izithombe zezithombe nama-movie wezingane abizwa ngesiRomania.
Ngokusobala, uma ungakhulumi isiRomania usesikweletu ngokuya ngokubuka imidlalo yaseshashalazini ebukhoma, kepha iBucharest yidolobha lesiteji sokuqala, ngomqondo weshashalazi ongaqhathaniswa nezinye izihloko zaseYurophu. Gcina iso lakho likhiqiza umdlalo wokudlala osuwazi kale: ikhwalithi yokubamba ngokuqinisekile izoyenza ifanele isikhathi sakho. Phakathi kwezinkundla zokubukwa eziphawuleka kakhulu kuleli dolobha kukhona i-National Theatre, Teatrul Bulandra (izigaba ezimbili ezindaweni ezimbili ezihlukene eCentral Bucharest), nase-Odeon, kepha kukhona ingxenye enhle yeshumi nambili yabanye abasukela kokuhle kuya kokuphambili.
Izitolo ezinkulu ezinamagama omkhiqizo nama-boutique aphezulu ahlanganiswe eceleni kwebhoulevard ukusuka ku-Piaţa Romană kuya ku-Piaţa Unirii nasemigwaqweni emincane eseduze nale boulevard, kodwa naseCalea Victoriei, eCalea Dorobanţilor (ingxenye ephakathi kweBlvd. Iancu de Hunedoara ne Piaţa UDorobanţilor) noma engxenyeni kaCalea Moşilor phakathi kweBlvd. UCarol I noPiaţa Obor.
Eminyakeni edlule izikhungo eziningi zanamuhla zokuthenga zithengile edolobheni, okuthandwa kakhulu ukuthi:
IBăneasa Shopping City, iSoseaua București-Ploiești 42D. I-Mon-Sun: 10: 00 to 22: 00.
I-AFI Palace Cotroceni, Bulevardul Vasile Milea 4, ISifunda 6. I-Mon-Sun: 10: 00 to 23: 30.
I-Promenada, i-Calea Floreasca 246B, i-District 1. I-Mon-Sun: 10: 00 to 22: 00
I-Plaza Romania, Bd. Timişoara nr. I-26,
Isikhungo Sokuthenga i-Unirea, Piaţa Unirii,
I-Sun Plaza esifundeni i-4, eCalea Vacaresti, No. 391,
IBucharest Mall, iCalea Vitan 55-59 - eyokuqala ukuqedwa, e1999.
Isikhungo senkululeko esigabeni 5, savulwa i-31st Okthoba 2008
UJolie Ville, umhl. U-Erou Iancu Nicolae nr. I-103 bis, Voluntari, Judetul Ilfov
Izitolo ezinkulu ezitolo eBucharest kanye nendawo ezungezile kuyakhiwa njengamanje noma ezigabeni zokuhlela ukwakhiwa
UThomas Antiques, Str. I-Covaci 19 (indawo yeLipscani). Isitolo esihle sendulo. Iqoqo elikhulu lama-antique futhi lapho kungenzeka ukuba nesiphuzo kulo mkhuba oyingqayizivele.
I-Leonidas Universitate (I-Belgian Chocolate), iStrada Doamnei 27. I-Mon-Fri: 10: 00 - 20: 00 Sat: 11: 00 - 15: 00. Isitolo esaziwa ngokuthi ushokoledi, salabo abanamazinyo amnandi. Indawo okuyo isondele kakhulu esikhungweni esidala esingokomlando. Bakhonza no-Ice & Benry kaJerry Ice cream.
Imakethe ye-Obor (Piața Obor), (eMpumalanga ye-Obor metro). Imakethe yomphakathi enkulu kakhulu yedolobha, ehlanganisa amabhlokhi amadolobha amaningana kanye nezinye izitolo eziningi ezisebenzayo ezizungezile. Kakhulu, kepha hhayi ukudla kuphela. Okwesimanje kuma-2010s, kepha usenabalingiswa abaningi.
I-Escape Igumbi Bucuresti (Igumbi Lokuphunyuka I-911), (Middle Bucharest Piata Unirii). Uma ufuna ukuzijabulisa phakathi kwedolobha ubalekela ingqondo yakho emsebenzini ubalekela egumbini lokuphumula nabangani bakho i-911 egumbini lokuphumula kuyindawo ongaya kuyo
I-Zestre. Izingubo zasendaweni, izesekeli nophawu lobucwebe oluhlanganisa imidwebo yendabuko eyenziwe ngezandla yaseRomania nezingubo zasemadolobheni nobucwebecwebe.
I-BestRide. Izimpahla zomgwaqo ezingekho emgaqweni, woza uzothenga.
Ama-TopDivers. Ama-awings, i-pergolas, izinhlelo zesithunzi.
SuperToys.ro. Amathoyizi wezingane
Amanani avame ukuya noma kuphi ukusuka ku- € 5-7 kuya ku- $ 30-40 yokudlela ephezulu ephezulu yemenyu yomuntu oyedwa equkethe ukudla (izindawo eziningi zinikeza amamenyu we-€ 5-7 ama-Euro abandakanya i-Entree, Dish Main ne-Dessert noma isiphuzo ) nesiphuzo esithambile. Ukudla okusheshayo okuthandwa kakhulu ngokungangabazeki yiShaorma, enamakhulu ezindawo ezidayisa cishe kuzo zonke izigcawu, iMall noma ezitaladini. Ngokucabanga, izindawo ezithandwa kakhulu nabantu baseRomania yiDristor Kebap, iCalif noma iDines.
Cuisine-smart, ungathola izindawo eziningi ezinikeza amaRomanian noma ezinye izinhlobo zokudla, ikakhulukazi iTurkey (Divan, Saray, Sultan), I-Italian (Trattoria Verdi, Trattoria Il Calcio) ne-French cuisines (i-French Bakery, Bon), kodwa futhi neChinese (Peking I-Duck, i-5 Elemente), iSpanishi (Alioli), iNdiya (Kumar's Agra Palace, Taj), isiGrikhi, isiJapanese (i-Zen Sushi).
Amabhasi aphephile, kepha sebenzisa umqondo wakho ojwayelekile, bese ubeka izinto zakho emaphaketheni angaphakathi, ukuze uqiniseke nge-100%.
Uma ukhetha ukuthatha itekisi ejwayelekile kunokuba usebenzise uhlelo lokusebenza olunjengo-Uber noma i-taxify, qaphela ukuthi amanye ala matekisi angasetshenziswa ngabantu abahamba belinde isisulu esingabekezeleli. Lokhu kuyiqiniso ikakhulukazi kumatekisi azungeze iGara de Nord lapho abahlanganyeli bawo bezama ukukuyenga ngezimoto ezinjalo. Uma kungenzeka, gwema ukuthatha ama-cabs eGara de Nord ngaphandle kokuthi ujwayelene nabasebenza amatekisi lapho. Umthetho owodwa wesithupha ukuhamba nabashayeli bamatekisi abadala, ngoba bazoba nokuqapha kakhulu futhi bazame ukuthola okungeziwe kuwe uma bekukhwabanisa, ngokungafani nabashayeli abasebasha abazofuna uhambo lubiza izikhathi ze-3-5 kufanele, ingahle ithi imitha ayisebenzi, futhi ingazama amaqhinga okusabisa ukukwenza ukhokhe.
Ukufeba akukho emthethweni njengoba kucelwa. Khumbula kakhulu lokhu futhi ungamukeli noma yikuphi ukunikezwa, ikakhulukazi kusuka kubalamuli "abaziyo indawo" (izinduna, abashayeli bamatekisi, njll.) Ngoba amantombazane avame ukuphoqwa futhi uma ubanjwa uzobekwa icala lobugebengu obuhlobene. nokushushumbiswa kwabantu okuvame ukuphela ngesigwebo sejele. Lokhu kusebenza futhi kuma-parotic we-erotic massage athe avula eminyakeni yamuva.
Qikelela kakhulu ukunikezwa okungacelwanga kosizo ngabantu abadlula ngendlela, noma ngabe banesiNgisi esihle. Ikakhulu uma umuntu ongaziwa ethi uzokuphelezela ehostela lakho noma ehhotela etekisini ukukhombisa indlela, yetha ngokushesha. Isikhathi esiningi basebenza ngokuhambisana nabashayeli bamatekisi abangafakwanga abazokuzama ukukugcona, bakukhiphele ezindaweni ezingalungile (nezikude) ngenkathi bafuna inkokhelo enkulu, noma abazomane bantshontshe umthwalo wakho. Umkhonyovu ojwayelekile ngowokuthi ongaziwa akutshele ukuthi indawo ayiphephile, futhi akuqondise kwitekisi elisemthethweni "likahulumeni" noma "lomfundi" eliqhutshwa yi-accomplice. Bazokuhambisa endaweni ekude, futhi bafuna isamba semali ephezulu, mhlawumbe bakusongele ngodlame uma ungathobeli.
Qaphela futhi lapho ugibela noma ushiya izitimela. Ama-Scamsters aziwa ukuthi enza abanye abantu njengabagibeli, futhi angena ezindlini zokuphumula noma ezindlini zokulala ezitimeleni ngenkathi umuntu opholile elinda ngaphandle, bese antshontsha umthwalo. Lapho ucela usizo ezitimeleni zokugibela, thinta kuphela umqhubi futhi uma umuntu ekubuza imininingwane, funa ukubona umazisi.
Yize ngokwezibalo, iBucharest ingenye yamakhompiyutha aphephe kakhulu eYurophu, udlame akuyona into eyinqaba ezindaweni ezithile, maqondana nabantu bendawo noma amadoda abukeka njengamazwe angaphandle (amancane, ngaphandle kwabantu abathile, njll. Ama-nightclub kanye nemigoqo, lapho ukuphuza kakhulu kwenzeka njalo , bathambekele kakhulu kulokhu, ikakhulukazi labo abadlala umculo wezinhlanga. Kodwa-ke, ukugwema noma yikuphi ukungqubuzana, ikakhulukazi nabantu abanomoya 'wokuthola indawo' noma ukubukeka kwe-mafioso kuzonciphisa amathuba akho acishe abe yi-zero.
Njengamanye amadolobha amakhulu, ukuhambahamba ebusuku akuphephile kwezinye izingxenye zedolobha njengePantelimon, Ferentari, Giuleti, kanye nendawo yeGara de Nord. Uma kufanele uhambe kulezi zindawo, kuphephile ukuthatha itekisi.
Izinga lobugebengu liphansi, kepha isihambi kumele ngaso sonke isikhathi siqaphele. Ukuhlaselwa ngobudlova kuphansi kakhulu, kepha uma kuhlaselwa nje, “Ajutor!”. Kunzima kakhulu kunoma ngubani ukuthi abalekele ubugebengu obunobudlova ngoba njengoba konke kugcwele ndawonye, ​​noma yimuphi umsindo omkhulu uzoheha ukunakwa. Ngempela leli lingumuzi ongalali. Uzothola abantu ngaphandle nxazonke ngawo wonke amahora ezindaweni eziningi zedolobha. Amaphoyisa amadoda anobuhlobo obuhle futhi iningi labancane likhuluma isiNgisi, ngakho-ke ungabuza izinkomba. Uma kwenzeka udinga ukubika ubugebengu emaphoyiseni, unganqikazi bese uqhubekela esiteshini samaphoyisa esiseduze. Bazokusiza kaningi ngokwamandla abo.
Umuntu kufanele aqaphele njengomuntu ohamba ngezinyawo. Abashayeli bangacatshangelwa. Ungacabangi ukuthi imoto izokuyela lapho kukhanya obomvu noma uhamba ngezinyawo. Kodwa-ke, ngokungafani namanye amazwe ase-Europe, abashayeli kufanele bamise abahamba ngezinyawo emigwaqweni eyinqamula. Unelungelo lendlela yokuhamba ngezinyawo.
I-Snagov yidolobhana elincane i-20 km enyakatho yeBucharest, futhi iphunyuka ngokushesha edolobheni kubantu abaningi, ine ichibi layo elikhulu namabhishi. Vakashela isigodlo esincane sezindela esiqhingini esiphakathi echibini, lapho kukhona ithuna likaVlad III (elaziwa kangcono ngokuthi iDracula noma iVlad The Impiler). (Qaphela ukuthi indlela esuka kumgwaqo omkhulu uya esigodini sezindela ayinamaphawu futhi inzima kakhulu ukufika kuyo, futhi kuzodingeka uwele ibhuloho labahamba ngezinyawo)
Mogoşoaia kungenye futhi idolobha elincane eliseduze neBucharest (i-5 km), enesigodlo esikhulu sekhulu le-17th sekwephuzile ngesitayela esiyingqayizivele seBâncovenesc.
I-Târgovişte itholakala 78 km North-West yenhloko-dolobha yaseRomania futhi itholakala kalula ngebhasi lesitimela noma ngamabhasi. Kwakuyidolobha elikhulukazi leningizimu yezikhathi zanamuhla Romania ibizwa ngeWallachia noma Izwe laseRomania phakathi kokuqala kwekhulu le-15th ne-1714. Okuhehayo kuleli dolobha umnyuziyamu ovulekile “eNkantolo Ebonakalayo”, empeleni, izinsalela zale nkantolo yesikhathi esidlule yaseTargoviste lapho iVlad ruledepe ruled (Dracula) ebusayo yabusa izwe, owayekade eyiMpi Base kwakunguCeauşescu wachitha isikhathi sakhe ezinsukwini zokugcina ukusuka ku-22end kuya ku-25th kaDisemba 1989 ngenkathi elanywa, elahlwa yicala futhi wabulawa endaweni efanayo, futhi emasontweni ama-20 akhiwe kakhulu ngekhulu le-17th ne-18th kodwa bambalwa ngisho nangabadala njengekhulu le-15th.
E-Buşteni thola uhambo oluya edolobheni lethu elincane ukusuka esiGodini sasePrahova ngesitimela, thatha umgwaqo weGondola bese ubona intaba i-Omu, i-Babele noma iSphinx eyaziwa ngokuthi yi-Natural-Made Sphinx.
I-Sinaia ibonakala kalula njengohambo losuku olusuka eBucharest (ukuthatha isitimela kuyindlela enconyiwe). Ungaphuthelwa inqaba enhle kaPeleş.
Constanta amahora angu-3.5 kude ngezindleko ze-55 RON. Amabhasi ahamba yonke imizuzu ye-45 phakathi nehlobo kanti amanye amabhasi anikezela nge-WiFi-uxhumano. Lesi siteshi siseduze naseGara de Nord ekuxhumaneni neStrada Mircea Vulcanescu & Bulevardul Dinicu Golescu.
Sofia imayelana namahora we-11 ngeSitimela. Kukhona isitimela esishiya iGara de Nord e-23: 15 cishe nge-120RON yokuhlala izihlalo nange-170RON ye-Courchette.
Istanbul imayelana namahora we-12 ngebhasi. Kunamabhasi amaningana (aqondile) ashiya nsuku zonke, aqhutshwa yiToros, Murat, Oz Ortadogu kanye ne-Star. Amathikithi angathengwa cishe nge-160RON-one-way. Ezinyangeni zasehlobo kukhona nesitimela esiqonde ubusuku bonke esiya e-Istanbul.